EAM: Miomana hanakana ireo tranonkala manafintohina ny DU · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2019 4:01 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny avrily 2006)
Nanomboka nanakana ny fidirana amin'ny tranonkala heverina ho “manimba saina” sy mahatohina ny “soatoavina ara-kolontsaina, sosialy ary maoraly” ny DU, ilay mpanome tolotra aterineto faharoa any amin'ny faritra malalaka ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Ireto avy ireo faritra malalaka ireo Dubai Media City, Dubai Internet City, Knowledge Village, Marina ary ireo fotodrafitrasa fonenan'ny mponina hafa.
Araka ny Emirates Business 24/7, nampafantatra tamin'ny mpanjifany tamin'ny SMS ny DU ny fikasany hanao sivana amin'ny aterineto amin'ny alahady 13 Avrily 2008: “Tianay ny mampafantatra anao fa manomboka amin'ny 14 avrily 2008, hosakananay ny tranonkala ahitana votoaty tsy mifanaraka amin'ny soatoavina ara-maoraly, sosialy ary kolontsaina eto EAM.” Namoaka fanambarana ho hitam-bahoaka tahaka izao ihany koa ny DU:
Ezaka tsy mitsahatra ataonay ny mihazona ny fandanjalanjana tsara tsy misy tomika amin'ny fiantohana fa azo daholo izay takian'ny mpanjifanay, sy ny fanarahanay ny torolalan'ny TRA, ka tafiditra amin'izany ny fampidirana sivana amin'ny votoatin'aterineto.
Manokatra fidanadanana lehibe ho antsika ny WWW (tranonkala manerantany) mba hahazo sy hizara torohay sy hifandray. Na izany aza dia tsy maintsy tanterahina, rehefa mampiasa ity teknolojia ity amin'ny tombontsoa lehibe azo avy aminy, ny fanajanay ny soatoavina ara-pitondratena, ara-piarahamonina ary ara-kolontsain'i Emirà Arabo Mitambatra.
Hosakanan'ny DU ny votoaty rehetra tsy manaraka ireo soatoavina ireo, mihatra manomboka ny 14 avrily 2008. Noho ny karazan'ilay fomba fanivanana votoaty, dia mety ho voasakana tsy nahy ihany koa ny tranokala sasany tsy manafintohina. Mangataka ny fanampian'ny mpanjifa izahay hampahafantatra anay raha isy tranonkala heverina ho tsy manafintohina nefa dia voasakana, amin'ny fanoratana ao amin'ny safesurf@du.ae mba hijerenay ny toe-javatra.
Midika izany hetsika izany fa tapitra hatreo ny fisitrahana ny tsy fisian'ny sivana amin'ny aterineto amin'ireo faritra malalaka ao EAM hatramin'ny vao haingana ireo ary ho entin'ny Mpanome tolotra aterineto DU any amin'ireny faritra ireny ny fanaovana sivana an'aterineto ho fanarahana ny torolalana sarotiny napetraky ny Telecommunications Regulatory Authority (TRA) izay efa napetraky ny Mpanome tolotra aterineto tantanin'ny governemanta Etisalat taona maromaro lasa izao. “Tsy fitsipika vaovao vao napetrakay ireo tsy akory, fa fandraisana andraikitra nofidianay mba hanakanana ireo votoaty sasany rehefa nahazo fitarainana avy amin'ireo mpanjifa miahiahy izahay,” Osman Sultan, hoy ny Lehibe mpanatanteraky ny mpanome tolotra aterineto DU Dubai tamin'ny ArabianBusiness.com.
Vokatr'izany, voalaza fa voasakana ny Secret Dubai Diary miaraka amin’ny Arab Times izay miorina any Etazonia (efa samy voararan'ny Etisalat izy roa ireo), voasakana ny lahatsoratra Wikipedia iray momba ny fitna, filma notontosain'ilay depiote Holandey Geert Wilders, playboy.com (syny adiresiny IP: http://216.163.137.3).
Izaympisera miezaka miditra amin'ireo tranonkala nosakanana ireo dia nalefa ho any amin'ny pejy iray mampiseho hafatra fahadisoana: “Miseraserà lavitry ny loza. Tsy vonona eto EAM ny tranonkala”.